Anyị amaworị otú Smart Glow si apụta na Galaxy J2 (2016) | Gam akporosis
Smart Glow, Samsung ụdị ọhụụ nke ọkwa LED, leaks n'ime Galaxy J2 (2016)
Ọ bụrụ na e nwere weghachite ihe niile nke ekwentị iji pụọ iche na ndị ọzọ, emechara ya. Anyị ahụworị otú na ihuenyo, mmewere nke yiri ka ọ gaghị enwe mgbanwe dị ukwuu na afọ ndị na-abịanụ, ogwe ọnụ ọnụ ga-enwe mmetụta dị ukwuu nke mere na na Galaxy Note7 na-esote anyị na-ahụ ya dị ka ụkpụrụ ọkọlọtọ maka nnukwu ahụ ekwentị.
Ihe yiri ya na-eme na ọkụ ọkụ ọkụ a nke na-enyere anyị aka ịmata ma anyị anatala WhatsApp, ozi Telegram ma ọ bụ aha Facebook. Ma ọ bụ na ekele maka Galaxy J2 (2016), Samsung na-egosi a ụdị ọhụụ nke ọkwa LED ya na mgbanaka ahụ ka ọ kpọrọ Smart Glow.
Smart Glow nwere ike rụọ ọrụ na agba dị iche iche Dabere na onye na-akpọ oku, ọnọdụ batrị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ nwetakwuo ọkụ ka ihu gị wee zuo ezu mgbe ị na-aga iji selfie na igwefoto azụ. Atụmatụ ndị ọzọ nke Samsung nwere bụ na oge ịdọ aka ná ntị na nha nwere ike ịgụnye iji nyere aka ịmata obi obi ma ọ bụ ụdị ihe ndị ọzọ.
Ugbu a, ekele maka nzacha a, anyị nwere ike ịma etu Smart Glow ga-adị na nke ahụ akpa ndise nke a na-ahụ echiche dị ka, na ọ bụghị dị ka ọ bụ na aga na ehi ehi. A atụmatụ iji banye na ekwentị ndị ọzọ nke onye nrụpụta Korea wepụtara nke nwere ike ịga nke ọma, ebe ọ bụ na Samsung anaghị akwụsị ịkụnye ihe mgbakwunye ọhụrụ ndị a. Anyị ga-ahụkwa otu o si eme na oriri batrị, ebe ọ bụ na n'etiti ọnọdụ "mgbe niile", mgbanaka ngosi ọkụ ọkụ na ụfọdụ mgbakwunye ndị ọzọ, ọ nwere ike iche na oriri nke nwere ike ịka mma maka usoro ọrụ ọzọ, dịka ịkwụ ụgwọ ụbọchị kpamkpam na obodo kwụụrụ onwe; ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka otu n'ime njedebe ọhụrụ dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Smart Glow, Samsung ụdị ọhụụ nke ọkwa LED, leaks n'ime Galaxy J2 (2016)
Julaị 13 bụ ụbọchị ntọhapụ na Spain maka Spainmụaka YouTube